Otu a na-esi elele
Gafere ebe nyagharị
Gburu-gburu ụwa - Igbo
Họrọ otu Obodo Igbo
Akauntụ-m na Ngalaba-ukwum
Dee Mbanye Dee Mpụta
Nhazi Account nile
Akwụkwọ nsọ niile
Enyem-aka Ọmumu ihe nile
Gbasara Akwụkwọ-nsọ nile
Ndi-isi otu Nduzi Mbụ na Ozi nleta nile
Nkwupụta niile na Ịma ọkwa nile
Ọgbakọ ozuru oha
Ihe enyem aka/ Ihe ndị akwadebere
Akwụkwọ ọmụmụ ihe niile
Ọkwa Nchụ aja Melkizedek
Ọkwa Nchụ aja Erọn
Otu Eyem aka
Akwụkwọ ọmụmụ ihe niile dum
PDF Ibe ana agu akwụkwọ
Mgbasa-ozi niile na Akara niile
Otu esi Ele
Ejiri mara Igwe-okwu
Nzukọ niile nke Ozuru ọha Otu Enyem-aka
Nzukọ Ozuru ọha Otu Enyem aka
Igwe (onyonyo)Ụzọ-mgbasa-ozi LDS
Gịnị bụ ihe nile a chọrọ na usoro ahụ iji lele ihe dị n’ime onyonyo ya na Igwe (onyonyo)Ụzọ-mgbasa-ozi LDS
I kwesịrị inwe otu n’ime ihe ndị a na-eji emeghe intanet nile na Flash ụdị nile a rụnyere na kọmputa gị.
Hụba-ama: Ọbụrụ na flash gị na-emebikarị, biko, mee ka flash hardware kwụsị inwe ike ịga n’ihu. Nke a kwesịrị ịkwụsị mmebị ahụ ma nye ihe nlere onyonyo mkpọghachi-azụ ohere ịga n’ihu. Bikolee ntụzi-aka nile ahụ n’otu a na-esi eme nke a.
Windo nile PC
Firefox 3.0.1 ma ọbụ nke dị elu karịa
Safari 3.2.2 ma ọbụ nke dị elụ karịa
Safari 4 ma ọbụ nke dị elụ karịa
Firefox 3.0.1 ma ọbụ nke dị elụ karịa
Safari 3.2.1 ma ọbụ nke dị elụ karịa
Igwe e ji akpọ Flash 10
Hụba-ama: E nwere ihe-nsogbu amatara n’ụdị Flash 10.1.85.3. Biko kwalite n’ụdị kachasị dị ọhụrụ na Flash ma ọbụrụ na i na-enwe nsogbu nilele ihe dị n’ime onyonyo na Igwe-ụzọ mgbasa-ozi LDS.
Anyị achọpụtakwala otu ihe dị na iOS 4.3x. Mgbe a pịchara bọttin nke play ahụ, biko chere obere nkeji ole na ole iji kwadoo, ma mgbe ahụ o kwesịrị ịmalite. Mgbe ọ na-amalite, biko apịkwala bọttin a na-eji amalite dị n’etiti ọzọ ma ọbụ nke ahụ ga-egosịpụta n’akụkụ. Nke a na-eme na 4.3x.
Gịnị mere ihe nlele onyonyo na-eji enwe aramahụ ma ọbụ na-akwụsị mgbe a na akpọghachi ya?
Ihe nlele onyonyo nwere ike new aramahụ ma ọbụ na-akwụsị mgbe a na-akpọghachi ya ma ọbụrụ na nkonye gị n’Internet anaghị eme ọsọsọ nke zuru ezu ma ọbụ ọbụrụ na kọmputa gị nwere ihe na-ebugharị ya na-aga nwayọ nwayọ karịa otu o kwesịrị ma ọbụ ntakịrị RAM (memory). Ọbụna na nkonyekọta nile na broadband, ịkpụkọta ọnụ nke internet ma ọbụ otu ozi si na-agafesị nwere ike ịkpata adịghị n’otu ebe nke mkpọghachi ma ọbụ ime ugboro ugboro nke ihe nlupụ-obi.
Olee otu m ga-esi kekọrịta nkonyekọta n’ihe nkiri video a kpọrọ aha?
JiriIhe nkiri Shared Video ahụ ma ọbụ Nweta Link ebe nhọrọ nile site na bọttin rollover menu nile dị nigwe ikpọ ihe nkiri ahụ. I nwere ike ịcọpị ihe njikọta ahụ ma buga ya na ozi e-mail ma ọbụ ihu-akwụkwọ web.
Gịnị ka “Get Code” na-eme?
Ebe nhọrọ Get Code ahụ na-enye ohere ịcọpị akara dị na HTML maka igwe-na-ịkpọ ihe onyonyo ma buga ya n’ime ihu-akwụkwọ web gị. I nwere mmasi nke a mee Igwe-ụzọ mgbasa-ozi LDS ka ọ bụrụ akụkụ nke ihu-akwụkwọ web gị.
Igwe-ụzọ mgbasa-ozi LDS ahụ na-ewepụta ịdọ aka na ntị nke na-asị enwere M mkpa ịwụlite Igwe na akpọ Flash ahụ. Olee otu m ga-esi ewụlite?
Igwe-ụzọ mgbasa-ozi ahụ ga-egosipụta ozi nke ga-adị ka nke a:
I nwere ike ipigide n’ozi ahụ iji nweta ụdị nke kachasịrị dị ọhụrụ nke Igwe na akpo Flash site na Adobe
Igwe-ụzọ mgbasa-ozi ndị LDS anaghị egosipụta otu ziri ezi ma ọbụ ọ naghi -egosipụta ihe onyonyo na-ezighi ezi. Olee otu m ga-esi mezi nke a?
Web brawụsa gị nwere ike na-egosipụta ozi ezoro-ezo (ma ọbụ) akụkụ ochie. Iji hichaa brawụsa cache gị ma hụ ụdị kachasị dị ọhụrụ nke ihu-akwụkwọ nke I nọ na ya, pigide CTRL + F5maka Windows ma ọbụCOMMAND + SHIFT + R maka Mac.
Windows Media Player (Igwe onyonyo ma ọbụ ọkwu Nanị)
LDS.org na-eji Windows Media Player si na Microsoft na-eweta ahiri igwe-onyonyo ma ọbụ ọkwu nile. Iji lele ma ọbụ gere ahiri onyonyo ma-ọbụ okwu nile ,i ga-enwe mkpa inwe Windows Media Player a na kọmpụta gị ma ọbụrụ na ọdịghị na mbụ.
Iji nwale ma i nwere Windows Media Player na kọmpụta gị, pigido nwale Windows Media Player Ọbụrụ na obere windo gosịpụta ma gị anụ okwu na ntị, ịdịla-mbụ nwe player ahụ. Ọbụrụ na brawụsa gị na-egosi na I nweghị ihe nkwubanye dị mkpa ma ọbụ enyem-aka ime ihe, mgbe ahụ I nwere ikeiwebata Windows Media Player n’akwụghị-ụgwọ.
Mụta kwuo maka ihe ejiri mara ọhụụ nile na igwe-okwu
I Nwere Azịza maka ihu akwụkwọ a?
© 2018 site n’aka intellectual Reserve, Inc. Ikike Mbipụta niile ka e dokwara